Mmadụ abụọ na-eche ihu n’ụlọ mkpọrọ mgbe ha kwenyere na ha nwetara ihe onyonyo nke nyocha Emiliano Sala nke ndị na-agba bọọlụ. . Sala, 28, bụ onye ka bịanyere aka na nkwekọrịta £ 15m maka Cardiff City, si na Nantes
Tottenham abanyela nkwekọrịta na Real Betis ịbanye Giovani Lo Celso maka klọb ịgba egwu-aling 60m (£ 55.3m) ebe Mauricio Pochettino na-atụ anya na azụmahịa maka Fulham’s Ryan Sessegnon nwere ike mezue tupu ụbọchị mbufe nke Thursday. N’ụbọchị na-arụsi ọrụ ike
Ndị enyi bụ n’ezie, onye nkuzi Bekee a na-asọpụrụ oge. Ma Luis Severino nke ndị otu egwuregwu bọọlụ New York Yankees, nke si Dominican Republic, yana onye Venezuela Wilmer Flores, onye bụbu onye iro Mets, ekwuola maka ịmụ asụsụ ngụkọta
Jürgen Klopp toro Andy Robertson mgbe onye aka ekpe ghọrọ onye ọkpụkpọ Liverpool kachasị ọhụrụ nke ga-eme ọdịnihu ya ogologo oge site na ịbịanye aka n’akwụkwọ nkwekọrịta afọ ise. /p> Onye isi ụgbọ mmiri Scotland were obere oge kwenye na
Ashley Cole na Derby County na -enwe mkparịta ụka na ebumnuche isonye na klọb Championship ruo na njedebe nke oge. A ghọtara onye dị afọ 38 onye bụbu onye mba England ka ọ na-atụle ma ọ ga-abịanye aka na nkwekọrịta
Ọ bụghị ihe nzuzo na a họpụtara Solskjær nwa oge mana ọ bụrụ na onye njikwa nwa oge na -eme nke ọma, ọ kwesịrị ịgbaso mgbe niile ka a họpụta ya kpamkpam? N’ezie, Solskjær karịrị ka ekwesịrị ịtụle mana ekwenyere
Onye ndu otu Dutch, Annemiek van Vleuten, agbagola ụzọ n’ihu isii nke nanị otu nnukwu njem ndị nwanyị mere na a ga-agbaghara ndị na-emegide ya maka iche na ọdịiche ahụ ga-akacha mma. Onye ya na ya na-eme egwuregwu Australia, Amanda
Egwuregwu England World Cup ikpeazụ na-achị ọchị ọchị afọ anọ gara aga, Eoin Morgan na-ekwu
Eoin Morgan kwetara n’echiche England ị ga-enweta iko mba ụwa ga-abụ ihe ọchị kemgbe afọ anọ gara aga. Mana mgbe ndị egwuregwu ya jigharịrị ihe ngosi egwuregwu obi ọjọọ na Australia na-enweghị obi ike .Jason Roy kpochiri mkpọtụ na sashays
Jason Roy na-emechi mkpọtụ na sashays iji na-agba ọsọ nke na-achọpụta ụbọchị ikpe-azụ nke Onye-nwe
Ọ bụ n’ụbọchị ahụ. Ka England jiri gbaa nke abụọ n’ehihie nsogbu, wee bido imebi ihe na 25 na-enweghị ihe funahụrụ ya, Roy amalitelarị ime ihe ndị dị ịtụnanya. Tupu Australia emeela 223 na pitch nke yiri ntakịrị ihe. mgbe
Sergio Agüero gbagburu okpueze na Aston Villa na ọrụ ọgbụgba Manchester City
Manchester City nwetaghachiri ọnọdụ nke abụọ na Premier League site n’aka onye isi ndị mba ofesi na-asọpụrụ na akụkọ Premier League. Sergio Agüero gbara mgba ahụ site na Thierry Henry ebe a n’ihi ekele mgbaru ọsọ atọ nke mekwara ka